“Hay’adaha Ammaanka Jubbaland waxa ay gacanta ku dhigeen…
Madaxeynaha DG Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo fariin ku saabsan Ciidda u dirayay shacabka waxa uu ka hadlay sugidda ammaanka Deegaannada Dowlad Goboleedkaas.
Shacabka ayuu uga mahad celiyay gacansiinta Hay’adaha ammaanka oo ku guuleystay in ay qabtaan qaraxyo iyo dadkii watay sida uu hadalka u dhigay Hogamiye Axmed Maxamed Islaam.
“Shacabka reer Jubbaland waxa aan uga mahad celinayaa sida Hay’adaha ammaanka ay ugala shaqaynayaan nabadgalyada, waxa ay taasi fududeysay in howlgaladii u dambeeyay ee Ciidamada ammaanku ay sameeyeen lagu soo qabta waxyaabaha qarxa iyo dadkii watay oo ay doonayeen in Shacabka ay ku dhibaateeyaan” ayuu yiri Hogamiye Axmed Madoobe.
Marka laga soo tago howlgalada amniga iyo natiijada kasoo baxday, waxa uu Hogamiye Madoobe shacabka ugu baaqay in ay gacan qabtaan dadka danta yar ee ku dhex nool munaasabadda Ciiddul Adxaa awgeed.
“Marka hore dhamaan Shacabka Soomaaliyeed meel waliba oo ay joogaan ugu hambalyeenayaa Munaasabada Ciidda Carafo ee Sanadka 1441-Hijriya, waxa aan xusuusinayaa muhiimadda ay leedahay in maanta oo kale la garab istaago dadka aan waxba haysan si ay farxad ugula ciidan Bulshada” ayuu yiri Hogamiye Axmed.